कपिलवस्तु अस्पतालका मेसु अस्पताल छाडेर निजी क्लिनिकमा बिरामी जाँच्दै NewsButwaltoday
कपिलवस्तु अस्पतालका मेडिकल सुपरिडेन्टेन डा. किशोर बन्जाडेले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको ठाडै अटेरी गरेको भेटिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखले निजी अस्पतालमा बिरामीको परिक्षण गर्न नपाउने निर्णय गरि सम्बन्धित निकायलाई दिएको निर्देशनलाई मेसु बन्जाडेले जानाजान अटेरी गर्दै आएका छन् ।
बुधबार बिहान १० नबज्दै कपिलवस्तु अस्पतालमा उपचार गराउन आएका बिरामीहरु लाईनमा थिए । तर अस्पतालका मेसु डा. किशोर बन्जाडे बस्ने कुर्सी १० बजे पछि पनि खाली थियो । कारण बुझ्दा अस्पतालका मेडिकल सुपरिडेन्टेन डाक्टर बन्जाडे दैनिक १२ बजे सम्म निजी अस्पतालमा उपचारमा संलग्न हुने गरेको गुनासो आयो । कार्यालय समयमा निजी क्लिनिकमा बिरामीको उपचार मात्रै गर्ने नभई बिरामीहरुलाई समेत उपचार गराउन आफ्नै क्लिनिकमा बोलाउने गरेको केहि बिरामीले आरोप लगाए ।
गुनासोको यथार्थता बुझ्न बुधबार बिहान करिब साढे ११ बजेको समयमा बुटवल टुडेकर्मी सहितका सञ्चारकर्मी कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर १ नयाँटोल स्थित बुद्ध क्लिनिकमा पुग्दा मेसु बन्जाडे क्लिनिकमै बिरामीको उपचारमा व्यस्त भेटिए । त्यस अघि बुद्ध क्लिनिकको काउन्टरमा रहेका कर्मचारीले डा. किशोर बन्जाडे क्लिनिकमा बिरामीको उपचारमा रहेको भन्ने जानकारी दिए । सञ्चारकर्मी पुग्दा डा. बन्जाडे र एक महिला स्वास्थ्यकर्मी बिरामीको उपचारमा संलग्न थिए । एक बृद्ध महिलालाई भिडियो एक्सरे गर्नका लागी बेडमा तयार पारिएको थियो । त्यस्तै डा. बन्जाडे आफैले एक बिरामीको जाँच गर्दै थिए । सञ्चारकर्मीहरु नजिकै पुग्दा अक्क न बक्क भएका मेसु बन्जाडेले बिरामीको जाँच गरेको स्थानबाट जुरुक्कै उठे । सञ्चारकर्मीहरु सँग नजिकै आई पुगेका उनले आफु कपिलवस्तु अस्पतालमा बिदा लिएर बुटवल जाने तरखरमा रहेको बताए । “म बिदामा छु, बुटवल जादै छु आज । हिजो देखी निस्किसक्या छु ।” मेसु बन्जाडेले भने । सो पश्चात कपिलवस्तु अस्पतालमा पुगी अस्पतालका व्यवस्थापक रत्नाकर शुक्लालाई मेसु किशोर बन्जाडे साढे ११ बजे निजी क्लिनिकमा भेटिएकोले बिदा लिए नलिएको जानकारी माग्दा आफुले सो बिषयमा बुझनु पर्ने बताए । “माथिल्ला तहका कर्मचारीले बिदा लिएको वा फिल्डमा रहेको हामीलाई तत्कालै थाहा हुदैन ।” व्यवस्थापक शुक्लाले पन्छिने प्रयत्न गर्दै भने । सो पश्चात मेसु बन्जाडेको हाजिरी कपी भएको अस्पतालको स्टोर शाखामा पुग्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी योगेन्द्र नाथ चौधरीले डाक्टर बन्जाडेले साउन १४ र १५ गते क्याजुवल बिदा लिएको जनाए । बिदा लिनका लागी बन्जाडेले दिएको निवेदनको बारे बुझ्दा चौधरीले डाक्टर बन्जाडेले फोनमा भने अनुसार हाजिरीकपीमा आफुले दुई दिनको बिदा चढाएको स्पष्ट पारे । “बिदाको लागी कुनै निवेदन छैन । डाक्टर सापले दुई दिनको बिदा चढाई दिनु भनेको आधारमा वहाँको हाजिरीमा दुई दिन बिदा चढाएको हु।” चौधरीले स्पष्ट पारे । अस्पतालका मेसु डाक्टर बन्जाडेले अस्पतालमा बिरामीको लाईन लगाई निजी क्लिनिकमा बिरामी जाँच्ने कार्य गलत भएको कपिलवस्तु नगर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष गोपीकृष्ण शर्माले बताए । “बिरामीहरु अस्पतालमा कहिले पालो आउछ भनेर लाईनमा छन । मेसु नै मन्त्रालयको निर्देशन बिपरित नियमित जसो निजी क्लिनिकमा बस्नु गलत हो । मन्त्रालयको निर्देशन अटेरी गर्ने मेसुलाई मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले तत्कालै कारवाही गर्न आवश्यक छ ।” नगर अध्यक्ष शर्माले माग गरे ।
कपिलवस्तु अस्पतालका मेसुले कार्यालय समयमै निजी अस्पतालमा बिरामी जाँच गरेको बिषयमा आफुहरुले प्रारम्भिक जानकारी पाएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले स्पष्ट पारे । अस्पतालका मेसुले निजी क्लिनिकमा परिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै यर्थाथ छानविन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार प्रचलित ऐन बमोजिम कारवाही प्रकृया अगाडी बढाईने निमित्त प्रजिअ नेपालीले जानकारी दिए । प्रदेश ५ को स्वास्थ्य निर्देशनालय निर्देशक डा. विनोद कुमार गिरीले कपिलवस्तु अस्पतालका मेसुले विदा लिएको बिषयमा जानकारी नभएको बताए । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु सापले विदा लिने भनेको सुनेको हु तर डा. बन्जाडेले विदा लिएको जानकारी छैन डा. गिरीले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दुई दिन अघि २०७७ साउन १२ गते परिपत्र जारी गर्दै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा समेत संस्थाको प्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सबैले निजी प्राक्टिस नगर्ने र यस भन्दा अगाडी निजी प्राक्टिस गर्न पुर्व स्विकृती लिएको भए सो स्विकृती स्वतहः खारेज हुने स्पष्ट पारेको छ । त्यसै गरि परिपत्रमा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले आफु कार्यरत सरकारी संस्थाको नाम निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा लेख्न नपाउने व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको छ । तर कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर १ नयाँटोल स्थित बुद्ध क्लिनिकमा मेसु बन्जाडेकै नाम ठुला बोर्डमा तिन स्थानमा राखिएको भेटिएको छ । मेसु बन्जाडेको नाम राख्दा क्लिनिकमा कपिलवस्तु अस्पतालका डाक्टर रहेको प्रष्टिने देखिन्छ । मन्त्रालयले दिएको निर्देशन बिपरित अस्पतालकै मेसुले कार्य गरे पनि उनी माथी कस्तो कारवाही हुने हो आम नागरिक सो बिषयमा प्रतिक्षामा रहेका छन ।
अपडेट : 2020-07-29 21:24:46